Ukudla – iAfrika
Ukudla kwesintu (Ingxenye yesibili)
Sizwe sikaNodumehlez’ kaMenzi engosini eyandulela le, “Ukudla kwesintu – Ingxenye yokuqala”, silobe ngokudla kwesintu kwamaZulu obekudliwa emandulo nokunye okusadliwa namanje noma sezashintsha izinto. Sithe ke lana asenabe ngakho ngoba phela kulengosi yokuqala besifinyeze amadolo ngalesisihloko sokudla kwesiZulu, sikha phezulu njengengwebu okhambeni lomqombothi. Siyaqhubeka ke nohlu lokudla kwesintu. Umbhaqanga yiphalishi lommbila noma lamabele. Umbhantshi wona uthakwa … Read more
Kuningi isizwe sikaZulu esihluke ngakho kwezinye izizwe nezinhlanga. Akugcini nje ngamasiko, indlela yokugqoka ngokuvunula, umculo kumbe indlela isizwe sikaZulu esicikoza ngayo ngolimi; kodwa lesisizwe siphinde sizidlele amahlanga nangendlela esidla ngayo ukudla kwaso kwesintu. Phela abaziyo bathi ukudla kwesintu kwehla esiphundu impela, ungeke ukunike esingaboni. Kuleli khasi ke sithi ake sisike kwelijikayo sihlobe ngokumaya (ukudla) kwesintu … Read more
Uma uphupha ukuthi udla ukudla okumnandi uzothola injabulo nempumelelo empilweni. Uma udla ulele phansi kusho ukuthi kukhona okuzokulahlekela. Uma ungowesifazane ongashadile kusho ukuthi kuzoba nezinkinga nelobolo lakho. Uma udla ekamelweni lokudla kusho ukuthi uzokwenza umngani omusha maduzane. Uma uphupha ukuthi udla kangangokuthi uzizwa ungaphilile kusho ukuthi uzohlupheka ngokwezemali. Amaphupho ngamasi. Amaphupho ngerayisi. Amaphupho ngesobho. Amaphupho … Read more
Uma uphupha udla amasoseji kusho ukuthi kungenzeka kunezikhathi ezinzima ekusaseni lakho. Amaphupho ngokudla. iAfrika
Tags Amasoseji, Inyama, Ukudla
Uma uphupha ukuthi udla isobho kusho izinto ezinhle ngekusasa lakho. Amaphupho ngokudla. iAfrika
Uma uphupha ukuthi udla irayisi kuwuphawu olubi futhi kusho ukuthi uzoba nezinkinga maduzane. Amaphupho ngokudla. iAfrika
Uma uphupha ukuthi uphuza amasi kuwuphawu olubi uma ebolile futhi kungenzeka uxabane nophathina wakho. Amaphupho ngokudla. iAfrika
Uma uphupha ukuthi uthenga ukudla kusho ukuthi kukhona into ozoyithola maduzane ikakhulukazi uma kungukudla okuphekiwe noma okuthengwa kudlelwe ekhaya. Amaphupho ngokudla. iAfrika